tayzar, Author at My Doctor - Page2of 203 " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ညှင်းမပေါက်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ??? ကဲ ညှင်းမပေါက်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲတဲ့။ ညှင်းမပေါက်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရလဲဆိုတဲ့အခါ ညှင်းဟာ သဘာဝအတိုင်းလူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတတ်တဲ့မှိုအမျိုးအစားတစ်မျိုးဆိုတာသိထားရမယ်။ သဘာဝအတိုင်းရှိနေတတ်တာမို့ မကြာခဏဆိုသလိုလဲ ပြန်ပြန်ပြီးဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေအောင်အားပေးပြီဆိုရင်အချိန်မရွေးပြန်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ညှင်း ခနခမပြန်မဖြစ်အောင် အောက်ပါအချက်များကိုလိုက်နာလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုပါတယ်… ၁)အဆီများတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းများကိုရှောင်ပါ။ ၂)နေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုကိုလျှော့ပါ။ နေရောင်ခြည်ဟာ ညှင်းကိုပိုမိုဆိုးဝါး၊ပိုမိုသိသာစေရုံသာမက ညှင်းဖြစ်ပေါ်ဖို့ကိုလဲအားပေးပါတယ်။ ၃)နေရောင်ခြည်ထဲအချိန်ကြာကြာထွက်ရမယ်ဆိုရင်…
‘ညှင်း’ တဲ့ ပုံမှန်အရေပြားအရောင်မဟုတ်တဲ့ အကွက်အကွက်ကလေးတွေနဲ့ အရေပြားမှိုရောဂါတစ်မျိုး။ ဖြစ်တဲ့နေရာမှာသိသာထင်ရှားပြီး လူမြင်မတင့်တယ်သောရောဂါ။ပွေးလိုအရမ်းယားပြီးဒုက္ခမပေးပေမယ့် ဒီဟာကကျ လူမြင်လွယ်တဲ့နေရာတွေမှာအဖြစ်များလို့ လူကြားထဲသွားလာတော့ကျ ဒုက္ခရောက်ရတယ်။ မနာကျင်၊မကူးစက်နိုင်ပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်လေ့ရှိတာကြောင့် လူကြားထဲသွားလာရမှာမလုံမခြုံဖြစ်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ညှင်းကိုနိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေသုံးစွဲတာတောင်မှ အရေပြားအရောင်ဟာပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့လပေါင်းများစွာကြာနေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီ’ညှင်း’ဟာ လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအဖြစ်များတတ်လဲဆိုတာ ဒီနေ့ပြောပြပါမယ်။ ညှင်း ဘယ်နေရာတွေမှာအပေါက်များလဲ???…
စိတ်ဖိဆီးမှု၏ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ စိတ်ဖိဆီးမှု ကြားလိုက်တာနဲ့ ကောင်းတဲ့စကားလုံး မဟုတ်မှန်းတော့ လူတိုင်းသိလိုက်ကြမှာပါ။ ရုံးလောက၊ စီးပွားရေးလောကမှာလည်း “ငါ ခုတစ်လော စိတ်ဖိဆီးမှုတွေများနေတယ်” လို့ ဆိုပြီး ပြောဆိုနေကြတာ ခဏ ခဏ ကြားဖူးနေကျလည်း ဖြစ်မှာပါ။ စိတ်ဖိဆီးမှုဆိုတာ ကျင်လည်ရာ လူ့လောကမှာတော့…
ဆင်တုပ်ကွေးဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့တဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေကို ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်မလဲ ?
ဆင်တုပ်ကွေးဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့တဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေကို ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်မလဲ ? နာမည်ကြီးပြီး မဖြစ်ဘူးရင်ပဲခေတ်မမီလောက်အောင် ဒီနှစ်မှာပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးရောဂါ။ပေါ်ပြူလာဖြစ်ဆို ထိမိတဲ့သူတိုင်း ပုံကိုကျရော။အဆစ်အမြစ်တွေကိုက်ချက်ဆိုတာ ပြောတောင်မပြတတ်ဘူးဆိုတာမျိုး။အဖျားကကျသွားရင်တောင် အဆစ်ကိုက်တာလေးက Extension ဆွဲသေးတာ။ဆွဲချက်ကလဲ လက်ရောခြေထောက်ရောလန်ပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်မရပ်နိုင်တဲ့အဖြစ်၊ရေသောက်ဖို့တောင်လက်မမြှောက်နိုင်လောက်အောင်အထိ။ဟုတ်ပါတယ်၊၂၀၁၉ခုနှစ်ရဲ့ အကယ်ဒမီဆုရှင် ဆင်တုပ်ကွေးပါ။ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရော၊ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပါ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ကိုက်ခဲခြင်းတွေဟာ သာမန်တုပ်ကွေးနဲ့မတူပဲအတော့်ကို ပြင်းထန်လွန်းလှပါတယ်။ ဒီတော့…
နို့တိုက်မေမေတို့ဖျားတဲ့အခါ??? ရင်သွေးငယ်ကလေးများကို နေ့စဉ်မပြတ်စောင့်ရှောက်နေရသောနို့တိုက်မိခင်တို့ဖျားနာတဲ့အခါမှာ ကလေးကိုကူးမှာစသဖြင့် အစိုးရိမ်လွန်ကဲကာ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်နို့တိုက်မိခင်တို့ ပူပန်မလွန်ရအောင် မေမေတို့ဖျားနာတဲ့အခါဘာတွေဆောင်ရ၊ရှောင်ရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ နို့တိုက်မေမေတို့ဖျားတဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ??? ၁။မိခင်နို့ကိုဆက်တိုက်ပါ။ မိခင်ဖျားနာနေသော်လည်း မိခင်နို့မှာပါတဲ့အာဟာရနဲ့ ပဋိပစ္စည်းတွေဟာ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မေမေတို့ဖျားနေသော်လည်း နို့ချိုကိုဆက်လက်တိုက်ကျွေးပေးပါ။ အကယ်၍မိမိမှာနို့မတိုက်နိုင်အောင်ဖျားနာနေပါက…
ပါရာစီတမောကို ဘယ်လိုအခြေအနေမှာသောက်လဲ? ဘယ်လောက်ပမာဏသောက်မလဲ?
ပါရာစီတမောကို ဘယ်လိုအခြေအနေမှာသောက်လဲ? ဘယ်လောက်ပမာဏသောက်မလဲ? ပါရာစီတမော(acetaminophen)ကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဖျားနာသက်သာဆေးဖြစ်ပါတယ်။ဖျားတဲ့နာတဲ့အခါမှာသောက်ကြလေ့ရှိပေမယ့် မည်သို့မည်ပုံသောက်ရမည်ကိုသေချာမကွဲပြားသလို၊မည်သည့်ပမာဏသောက်ရမလဲဆိုတာကိုလဲ ဂဃဏန မသိကြသူတွေရှိပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် ပါရာစီတမောကို ဘယ်လိုအခြေအနေမှာသောက်မလဲ၊ဘယ်လောက်ပမာဏသောက်မလဲဆိုတာရှင်းလင်းသွားအောင်ပြောပြလိုက်ရပါတယ်။ ပါရာစီတမောကို ဘယ်လိုအခြေအနေမှာသောက်လဲ??? ၁)ဖျားနာခြင်း။ -ပါရာစီတမောဟာ ရောဂါရင်းမြစ်ကိုမသက်သာစေနိုင်ပေမယ့် ရောဂါကြောင့်ဖြစ်သောဖျားနာခြင်းကိုတော့ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ၂)ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ -သာမန်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ဖျားနာ၍ခေါင်းကိုက်ခြင်းသာမက ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါမှာပါ ပါရာစီတမောကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။…
သွေးပေါင်ချိန်တက်တိုင်း သွေးတိုးရောဂါလား သွေးပေါင်ချိန်တက်တိုင်း သွေးတိုးရောဂါ မဟုတ်ပေမဲ့ သွေးပေါင်ချိန် 130/80 ထက် ပိုတက်ဖူးရင်တော့ သွေးတိုးရောဂါဟုတ်မဟုတ် အမြဲစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုပါတယ်။ ခုခေတ်မှာတော့ အိမ်မှာပဲ Digital သွေးပေါင်ချိန်စက်တွေနဲ့ အလွယ်တကူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်လို့ ရနေပါပြီ။ သွေးပေါင်ချိန်စက်ဘာအမျိုးအစားသုံးမှာလဲ? “အမြဲတမ်း…
နေလောင်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ကုသနည်းများ အရင်ဦးဆုံးနေရောင်ခြည်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ် အရည်ပြားဟာ နေရောင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့လိုက်ရင် vitamin D3 ကို ထုပ်အောင်လှုံ့ဆော်လိုက်ပါတယ်။ vitaminD3ဆိုတာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေ စားသမျှထဲက calcium လို့ခေါ်တဲ့ အရိုးတွေသန်မာဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့ ဓာတ်ကိုအူတွေကနေများများစုပ်ယူနိုင်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးတာပါခန္ဓာကိုယ် သန်မာထွားကျိုင်းပြီး ရောဂါကင်းဝေးအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ တစ်ချို့ကအသားမဲမှာအရမ်းကြောက်ပါတယ်…